ipso-care (MY) - Ipso e-care homepage
Ipso e-care homepage - ipso-care (MY)
ipso-care မှ ကြိုဆိုပါ၏
ကျွန်ုပ်တို့ ၏၀က်ဆိုဒ်သို့ ဝင်ရောက်ခြင်းဖြင့် စာနာနားလည်မှုအပြည့်အ၀ရှိသော နိုင်ငံတကာမှ လူမှုစိတ်ပညာ အကြံပေးပညာရှင်များနှင့် တွေ့ ဆုံနိုင်ပါသည်။ ထိုပညာရှင်များသည် သင်၏ ခက်ခဲသောဘ၀အခြေအနေမှ ကောင်းမွန်သောဘ၀အခြေအနေသို့ လျှောက်လှမ်းရန် လမ်းကြောင်းကို သင့်အားကူညီပို့ဆောင်ပေးနိုင်ပါသည်။
ipso-care အနေဖြင့် ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်များ၏ လုံခြုံရေးကို တင်းကျပ်စွာ ထိန်းသိမ်းပေးသည့် client ကို အခြေခံသည့် အွန်လိုင်းဗွီဒီယိုဆက်ရှင်ကိုဖန်တီးပေးထားပါသည်။
ipso သည်ဂျာမနီနိုင်ငံတွင်အခြေစိုက်သည့် လူမှုရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတို့ ကို ယဉ်ကျေးမှုပိုင်းဆိုင်ရာအခြေခံ၍ အထောက်အပံ့များပေးသည့် လူသားခြင်းစာနာထောက်ထားသည့် လူမှုရေးအဖွဲ့ အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ (www.ipsocontext.org and www.ipso-cc-afghanistan.org).
ipsoမှအကြံပေးပညာရှင်များသည် လူသားတို့၏ တစ်ဦးချင်းနှင့် အများစုတို့ ၏ အခြေအနေနှင့် အခက်အခဲများကို ကောင်းစွာနားလည်နိုင်စွမ်းရှိသည့် အတွေ့ အကြုံများရှိထားကြသူများဖြစ်သည်။ သူတို့သည် သင်၏အခက်အခဲများ ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားနိုင်ရန် ကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။
ipso care မှ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။
စောင့်ရှောက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ ကူညီပါမည်။ သင့်အတွက် တံခါးဖွင့်ထားပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ အတွင်းသို့ ဝင်ပါ။
အကြံပေးခြင်းအဆင့်များနှင့်ပက်သက်၍ ဤအဆင့် ၃ဆင့်ကို ရှာဖွေပါ
ipso care သို့ ယခုပင်စာရင်းဝင်၍ အသုံးပြုပါမည်။
မိမိကိုယ်ကို ကိုယ်တိုင်စမ်းစစ်ခြင်းဖြင့် မိမိကိုယ်မိမိ ပိုမိုနားလည်အောင်လုပ်ပါမည်။
ထို့ နောက် ကျွန်ုပ်တို့ ၏ အကြံပေးသူတစ်ဦးနှင့် စကားပြောရန် ရက်ချိန်းယူပါမည်။
ဤအဆင့်ကိုကျော်၍ ipso care မှ အကြံပေးသူနှင့် ရက်ချိန်းတိုက်ရိုက်ယူမည်။
© 2019 ipso-care (MY) All rights reserved. info@ipso-care.com သှားလာခွငျးခုနျကြျော